Vinyl Flooring Luxury pvc p ...
SPC Flooring avo lenta ...
SPC Flooring henjana Core In ...
Export mafana fivarotana New Design SPC Flooring miaraka amin'ny tsindry hidin-trano SPC Vinyl Flooring
Ny gorodona vita amin'ny plastika vato (SPC), ny ampahany tsy manam-paharoa dia ny sosona fototra henjana izay vita amin'ny vovoka sokay. izay marin-toerana kokoa noho ny taila vinina nentim-paharazana. Ity fitambaran-javatra plastika vato ity dia mahatohitra ny fanitarana sy ny fihenan-tsasatra am-polony taona maro ary mety tsara ny mamokatra tsara any amin'ny toerana iray. Izy io dia 100% tsy tantera-drano izay tsy hikorontana na hikorontana.
Ny gorodona vaovao WPC gorodona plastika vato, karazana gorodona vaovao izay malaza any Eropa sy Amerika dia tsy tantera-drano, tsy misy afo ary mahatohitra tena. WPC gorodona tantera-drano mahasalama tontolo iainana, sosona nohamafisin'ny UV, ary gorodona nohamafisina ny lokon'ny UV dia hanatsara ny fanoherana ny akanjo amin'ny tany, fanoherana ny hafanana ambony, fanoherana tasy ary fananana hafa; lamba tonta mangarahara, misy fiantraikany mivantana amin'ny sosona fiarovana voalohany amin'ny fiainam-panompoana amin'ny gorodona plastika, coefficient avo lenta Ny sosona tsy mahazaka akanjo dia afaka manatsara ny fiainam-panorenan'ny gorodona;
Ny takelaka vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo-plastika dia karazan-kazo (cellulose hazo, cellulose amin'ny zavamaniry) ho fitaovana fototra, fitaovana polymer thermoplastic (plastika) ary fitaovana fanodinana, sns. Ireo fitaovana maoderina sy haitao mifandraika amin'ny tontolo iainana, atambatra amin'ny fiakarana sy ny mampiavaka ny hazo sy ny plastika, dia fitaovana teknolojia avo lenta izay afaka manolo ny hazo sy ny plastika. Ny fanafohezana amin'ny teny anglisy ny Wood Plastic Composites dia WPC.
SPC Floor dia vokatry ny haitao sy ny fahendrena. Izy io dia manolotra fifangaroan'ny sosona marobe, velarana fisaronana, fisalasalana avo lenta amin'ny fahadiovan'ny pvc mangarahara, sarimihetsika vita printy famaritana avo lenta, fototra SPC ary lamba moana. Ny SPC dia midika hoe 'vato vita amin'ny plastika vato' na 'fitambaran'ny polimer vato'. Ny marimarina kokoa, ny vatosokay, izay fitambarana tsy mitambatra. Mahatratra 50-70% ny atin'ny gorodona. Ny ambiny dia PVC sy stabilizer. Mazava ho azy fa ny ampahany dia nofaritan'ny mpitantana ny famokarana ozinina rehetra izay misy fiovana lehibe amin'ny kalitao.
SPC Flooring Tsindrio mifamatotra amin'ny Ixpe Backing
Ny tombotsoan'ny SPC Vinyl Flooring.SPC vinyl dia lasa iray amin'ireo gorodona malaza indrindra hapetraka noho ny antony maro samihafa. Raha tompon-trano ianao, mpitantana trano na tompona orinasa, mety ho safidy tsara amin'ny tetikanao manaraka ny spaoro visy SPC!
Vidiny mora vonoina Vinyl Click SPC Flooring
Anaran'ny marika ：IVERSON
Haben'ny takelaka ：935 * 183 * 4mm 1210 * 183 * 4.5mm / 6mm / 8mm
Wear Layer ：0.25mm
Underlay： EVA / IXP
Style Design: ANKEHITRINY
Toerana niandohana: Jiangsu, Sina
Fitsaboana ambonin'ny tany: Loko tsotra
Ny gorodona dia ampahany lehibe amin'ny haingon-trano. Betsaka ny olona mahita fa sarotra ny misafidy ny rihana SPC sy ny taila tanimanga. Raha ny marina dia samy hafa amin'ny lafiny maro izy ireo.
LVT gorodona Self-adhensive PVC vita amin'ny visy plastika
Fohy ho an'ny taila vita amin'ny vinyl lafo vidy, ny LVT dia natao hanahaka ireo fitaovana fanaovana gorodona mafy toy ny vato na hazo, nefa manome tombony azo tsapain-tanana bebe kokoa. Hita amina zana-kazo na tile, ny LVT dia mampiasa sary mihetsika azo sary an-tsary sy fisie vinina mazava izay manokatra foto-kevitra maro karazana.
Ny gorodona PVC dia karazan-java-haingo amin'ny gorodona vaovao be mpampiasa amin'ny firenena eran'izao tontolo izao ankehitriny. Tena malaza eo amin'ny tsena eropeana sy amerikanina ary ny tsena azia-pasifika izy io, ary malaza be koa izy any Chine, ary malalaka be ny vinan'ny fampandrosoana.
Ny gorodona PVC dia manana loko isan-karazany, toy ny voamaina vato, voamaina amin'ny gorodona, sns. Ny takelaka hazo tsirairay dia misy embossed, ary ny fanontana sy ny endriny dia mifanaraka mba hamoronana endrika hazo sy endrika tena izy. Mety amin'ny gorodona isan-karazany izy io ary ampiasaina amin'ny efitrano misy fifamoivoizana be, toy ny efitrano fandraisam-bahiny, lakozia, fandroana, efitrano fandriana, efitrano fandraisam-bahiny na fidirana sy lalantsara hisarihana masomaso. Izy io dia azo apetraka amin'ny beton, tile, vinyl na hazo, ary ny collocation famoronana dia azo zahana malalaka. Omeo fahafinaretana ny fiainana ary avotsory avy hatrany ny adin-tsaina. Ny gorodona dia miaraka amin'ny fametahana tena, izay azo ampiharina amin'ny fanesorana ilay taratasy famotsorana. Ny gorodona dia fisaka sy malama tsy misy fasika sy vovoka. Amin'ny antsy fampiasana, azonao atao ny manapaka tsy ara-dalàna, manome lalao feno ny faharanitan'ny mpamorona, ary hahatratra ny vokatra haingo mety indrindra; ampy ny manao ny taninao ho zavakanto, ary ny toeram-ponenanao ho lapan'ny zavakanto, feno tsiro kanto.